Umgexo eyenziwe amapharele - jewelry classic. Ziyakwazi ezifanele cishe kunoma isiphi isimo. Umgexo eyenziwe amapharele abe touch obugagu kanye kuhlanganiswe kokubili izingubo abayitoho kanye kusihlwa igqoka. Lawa imihlobiso ukuthi kweso ithuthukisa ukuzethemba, kukwenze njengabesifazane xaxa, elicwengiweyo futhi zakha isithombe sowesifazane yimpumelelo.
Lapho futhi yini okufanele uyigqoke imigexo of amapharele?
Wedding - okukodwa kokukhethwa kukho kakhulu. Mnene, umgexo Lihle ka amapharele yemvelo kufanelekile izitayela kakhulu sigqoka futhi agcizelele ubuhle umakoti. Kodwa futhi izivakashi zayo Ungase futhi ubonise izivunulo zenu kuzo zonke inkazimulo yayo - basuke kahle ngokuhlanganiswa izingubo zikanokusho.
Ngaphezu kwalokho, iparele lihlotshaniswa ukuzethemba, umusa kanye obugagu. Ngakho-ke, kuyinto ekahle ukuthambisa esiqinile isudi ngiwunike touch of ubufazi understated. Gqoka umgexo amapharele engxoxweni yokufuna umsebenzi, umhlangano ibhizinisi obalulekile, izingqungquthela kanye nezingxoxo.
Ngazo zonke izikhathi
Melana kahle ukuthi kuphela umcimbi obalulekile uyakufanelekela ukugqoka kwabo amapharele ulwandle yangempela. I umgexo kungenziwa kuhlangene ngaphezulu izingubo abayitoho. Ngokwesibonelo, actress Grays uKelli - isampula yinkimbinkimbi nangobuciko - ngaso sonke isikhathi egqoka intambo nge amapharele ekuphileni kwansuku zonke futhi esikrinini. Futhi suit ibhizinisi kanye ingubo yomshado, futhi ngisho ne ihembe nebhulukwe e isitayela safari liwumhlobiso wabheka ezifanele.
Ungakwazi sihlanganise amapharele nge jeans noma udale izithombe romantic retrostile nge iziketi kanye blouses ezihlotshisiwe. Picnic, umhlangano, umhlangano nabangane noma lokumamukela wokuziphilisa - Amaparele kukhona ezifanele ngaso sonke isikhathi njengoba Jacqueline Kennedy wathi.
Ikhono ukuhlanganisa izingubo ezahlukene kanye izesekeli - kuyinto ithalente ezingaba akasoze ayeka ukuba ngcono. Pearl umgexo is best kuhlangene namacici eyenziwe amapharele, kodwa ukukhetha, wokuba ame ngesikhathi izikopelo nesizotha noma namacici elengayo nge amapharele - kuye izintandokazi zakho.
Amagugu Ungase futhi kungahlali kahle phakathi eqenjini lomculo, kodwa kuphela uma naphakathi begodu ongaphakeme-key design, ngaphandle kwalokho konke ukunakwa iya kubo futhi ngaleyo ndlela athole zigcwale ngokweqile.
Stud namacici nge amadayimane - lawa imigexo ukuthi kahle misa amaparele, kodwa hhayi akusibekele ke. Lokhu kungenzeka futhi ihlanganisa legolide isongo mncane nge aluka ezithakazelisayo.
Akubalulekile ukuba sihlanganise amapharele nge izingubo neon-ezinemibala - ngokumelene isizinda kuzoba baphela amandla kakhulu. Kodwa ngisho ne iyashintsha iyaphupha ibe nemibala futhi, akufanele kube abashisekayo. ukusikeka okuqinile, imibala hlangothi nangamaparele Ungafaka iminyaka yakho. Umbala ukuthi iseduze, kodwa kuhlukile umbala ubuhlalu kunikeza umbono untidiness.
Iwayini, lokuluhlata kwesibhakabhaka, lobovu nezinye amathoni amnyama okukhulu iphelele njengoba ngemuva amatshe engcebo, nabo-ke kuyoba ngokucacile kakhulu sigqame.
Lokhu isici ngokuvamile kufuna ukuthi kungcono ukugqoka:
30-35 cm - ubude emfushane - ibizwa ngokuthi umgexo collar, futhi, njengoba umthetho, it siqukethe imicu eziningana amapharele. Lenza kahle isikebhe-neckline, izingubo V-entanyeni noma strapless, futhi okufanelekela kangcono kusihlwa igqoka.
35-40 cm - choker-umgexo - umhlobiso jikelele, efanelekayo cishe kunoma iyiphi isitayela sokugqoka futhi neckline.
43-48 cm - umgexo ngokuthi "iNkosazana." Lokhu obuphelele kubhekwa yakudala, kwanele ukuba igqoke phezu izingubo nge collar okusezingeni eliphezulu, kodwa akekho enhle kancane kubukeka nge izinto ongaphakeme-cut. Uma ungenaso isiqiniseko sokuthi ukuliphi usayizi kungcono ukukhetha intambo, noma ufuna ukuthenga ucezu ezibizayo ubucwebe eyokusiza amashumi eminyaka futhi kuyokuhambela kahle zonke izinto - ". Inkosazana" ukukhetha
66-90 cm - Umgexo "Opera." Kungaba elula njengokuthi intambo eyodwa, futhi ukugoqa double entanyeni yakho bese umgexo multilayer. Futhi ungakwazi tie ifindo ekugcineni. Lokhu nomhlobiso is ngokwesiko wamukela ukuhlanganisa kusihlwa igqoka, kodwa namuhla ngokuvamile ubonakala nge izingubo abayitoho.
Bangaphezu kuka-90 cm - Umgexo "Rope." Lokhu umhlobiso zikanokusho, okuyinto Koko Shanel yena okugqugquzelwa uthando okungavamile. It kungenziwa igqoke eziningi izindlela: uhala oboshelwe ngapha nangapha entanyeni izikhathi eziningana nilimaza esandleni sakhe njengoba isongo, ukubopha ifindo, waliphonsa emhlane wakhe, ukuhlobisa ingubo backless nokunye ..
Ngaphezu obuphelele, pearl imigexo zingahluka kusuka nomunye by amashumi neminye imingcele.
Ngokwesibonelo, ubukhulu lobuhlalu. Umgexo zobude obulinganako, kodwa amapharele diameters ezahlukene kuyodingeka ukubukeka ngokuphelele. Ngaphambili kukholakala ukuthi amadala umphathi, ubuhlalu emikhulu kungenzeka, kodwa manje yilezozintombi eziningi musa ukuphika ngokwami injabulo egqoke imigexo ahlotshiswe okukhulu.
Kodwa akukhona nje ifomu ekahle amapharele kungaba enhle. Akumelwe sikhohlwe ukuthi lokhu akukhona nje gem kanye impahla real yemvelo, ezakhiwe isidalwa esiphilayo okuyinto. Ngakho-ke, iparele umbala ezithakazelisayo futhi ukuma okungajwayelekile angeke likhanga kancane. Ikakhulukazi lapho kuqoqwa e laqanjwa obunobunye futhi yinqaba:
I okuphambili ngempela
A umgexo amapharele omnyama - kuyinto umhlobiso ezingavamile nenhle, okuyinto efanelekayo ngezikhathi ezikhethekile kakhulu. Hollywood izinkanyezi kungukuthi alivamile igunya ekhaphethini abomvu. Black pearl kudinga ezikhethwe ngokucophelela ngaphezulu izingubo nezinye izesekeli kuso. Zama ukuthi ungasebenzisi overload imininingwane isithombe bese ukuqinisekisa ukuthi umthunzi lobuhlalu ngokuvumelana umbala izingubo.
Uma imibala emnyama ngawe amadlingozi kakhulu, bese ngibheka amapharele e iyashintsha iyaphupha ibe nemibala - beige efudumele, ezibomvana, ezinsomi. Ubheka ujule, nenhle futhi sihambisana ephelele izinto ezahlukene.
Umgexo wegolide okungenzeka ukuthi nge pearl - umhlobiso wangempela Noma ikuphi ukuqoqwa ubucwebe. ntambo Elegant nge ubuhlalu ambalwa noma umgexo ngaphakathi which they kuhlangene ezinye ezihloniphekayo izakhi zensimbi - igugu ezinjalo ngeke kubiza isizumbulu eside, kodwa kubonakala sengathi inkosi.
Uma usafuna nje ukugxila amapharele ke ungakhohlwa ukuthi ukhona, futhi ecebile igolide imibala. Lona omunye eziyivelakancane futhi kuyabiza kakhulu izinhlobo zalo.
Ngamaketanga Gold amadoda
Ngilusizo nokunye okufana nokolweni impahla
Grass lovage: izakhiwo kanye nezicelo
Isilawuli lesizinda ohlelweni olusebenzisayo ezahlukene